Wiilka Mucamar Qadafi oo madaxweyne ka noqon kara Libya kadib dilkii aabihiis - Caasimada Online
Home Dunida Wiilka Mucamar Qadafi oo madaxweyne ka noqon kara Libya kadib dilkii aabihiis
Wiilka Mucamar Qadafi oo madaxweyne ka noqon kara Libya kadib dilkii aabihiis
Tripli (Caasimada Online) – Sayful Islam Qadafi, oo ah wiilka madaxweynihii hore ee Libya Mucamar Qadafi, ayaa isku sharxay xilka madaxweynaha Libya ee doorashada dhaceysa bisha December.
“Sayful Islam Qadafi wuxuu murashaxnimadiisa usoo gudbiyey guddiga sare ee qaran ee doorashooyinka,” waxaa sidaas lagu yiri bayaan kasoo baxay guddiga.
Qadafi ayaa ah mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu caansan ee la filayo inay u ordaan xilka madaxweynaha – liiskaas oo ay ku jiraan Jeneralka fallaagada ah Khalifa Haftar, ra’iisul wasaare Cabdulxamid Dabibah iyo afhayeenka baarlamanka Aguila Salax.
Sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya Qadafi oo garkiisu cirro ka buuxdo, islamarkaana xiran ookiyaale iyo qamiiska dhaqanka, oo warqadaha murashaxnimo ku saxiixaya magaalada Sebha, Axaddii.
Inkasta oo shacabka iyo quwadaha shisheeye ay aad u taageerayaan doorashada la waqtiyeeyey 24-ka December, haddana waxaa ku hareereysan shaki badan, ayada oo kooxaha kala duwan ee dalkaas ay isku hayaan xeerarka iyo jadwalka doorashada.
Doorashada ayaa loo arkaa marxalad muhiim u ah heshiiska nabadeed ee QM ee taageereyso ee lagu soo afjarayo 10 sano oo dagaal sokeeye uu ka socday dalkaas, kadib markii madaxweyne Qadafi xukunka looga tuuray kacdoon dadweyne, 2011-kii.
Qadafi ayaa horey maxkamad ku taalla Tripoli waxay dil ugu xukunktay dambiyo dagaal. Sidoo kale maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa u raadineysa dambiyo dagaal.
Ibrahim Fraihat oo ka tirsan Machadka Doha ayaa sheegay in Sayful Islam uu taageero ka haysto kuwa daacadda u ah taliskii aabihiis iyo qaar ka mid ah qabaa’ilka Libya.